Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Akụkọ banyere Angel Correa Child Plus Ihe Na-adịghị Ekeresimesi Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Angel Correa na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, Nku mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndị na-agba ọsọ nke Argentine, site na nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Angel Correa's Bio.
Akụkọ ndụ Angel Correa.
Ee, onye ọ bụla maara banyere oke ọnọdụ ọ na - awakpo ya - ezi nka ahụ, ije ije na etiti ike ndọda. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị nke Angel Correa's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akwụkwọ akụkọ Angel Correa - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Obere mmụọ ozi". Elngel Martín Correa Martínez amuru na abali iteghete nke onwa Mach 9 na obodo Rosario na Argentina ebe kpakpando di ka Lionel Messi, Mauro Icardi na Angel Di Maria nwekwara ike si.
Correa bụ otu n'ime ọtụtụ ụmụaka amụrụ nne ya amachaghị na nna ya nke amachaghị banyere ya. N'okpuru ebe a bụ foto a na - adịghị ahụkebe nke nne na nna Angel Correa- nne ya.
Gaa na nne na nna Angel Correa.
N'agbanyeghị nke ahụ, o doro anya na ọ bụ onye Argentine nke agbụrụ ndị agbụrụ na-amachaghị agbụrụ.
Toby Alderweireld Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ
You maara na eto eto Correa ka etolitere na mpaghara Las Flores nke Rosario ebe o toro na ụmụnne ya ndị amachaghị banyere ha?
A zụlitere ya na mpaghara Las Flores nke Rosario.
N'ịbụ onye na-etolite na nzụlite ezinụlọ dị ala na mpaghara Los Flores, Correa biri ndụ n'oge ọ dara ogbenye nke dara ogbenye na agbata obi ebe enwere nnukwu ohere na ọ nwere ike bụrụ onye ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ onye ikpe mara.
Angel Correa Mmụta na Bulọ Ọrụ:
Otú ọ dị, Correa nwere ike ịchọta ụzọ mgbapụ site na nsogbu ndị siri ike gbara ya gburugburu site na imikpu onwe ya n'okporo ámá n'okporo ámá ma nwee njikọ aka na-arụ ọrụ na klọb nwata na mpaghara ya - egwuregwu Alianza na Tiro.
Ka ọ na-erule oge Correa dị afọ 12, ọ ga-adakwasị ya nke ukwuu mgbe nna ya na-akwado ya na ụmụnne ya abụọ tụfuru.
Ọ bụ ezie na ihe mgbu ahụ karịrị Correa, ọ ga-eme ihe ọ ma ka esi eme nke ọma; ịchọta nkasi obi n'ụzọ football.
"Mgbe ọ bụla m banyere n'egwuregwu, ana m echezọ ihe ọjọọ niile dakwasịrị m, ọ na-atọ m ụtọ igwu egwu,"
E kpughere Correa.
Akwụkwọ akụkọ Angel Correa - Ndụ Mmalite Ya:
N'ụzọ dị mma, Correa adịghị mma naanị ịchọta ụzọ mgbapụ na bọlbụ mana ọ nwere ezigbo nka na bọọlụ, mmepe nke hụrụ ntinye aha ya na sistemụ ndị ntorobịa nke San Lorenzo na 2007 mgbe otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu chọtara ya.
A kpọbatara ya na San Lorenzo mgbe otu n'ime ndị na-eme egwuregwu chọtara ya.
Ọ bụ na akụkụ ndị Argentine na Correa nọrọ afọ 4 na-echekwa ọzụzụ na ọzụzụ ya maka ọrụ ga-eme ka ọ gafee kọntinent South America.
Nbuli ya site na klọb ahụ bụ meteoric na njedebe na 2013 mgbe ọ mere ọkachamara ọkachamara ya maka klọb a kpọrọ Ciclón.
Angel Correa Biography - Roadzọ ya nke A Ma Ama Akụkọ:
Mgbe otu afọ gachara, Correa kwenyere na nkwekọrịta nyefe ya na ndị na-ejide La Liga n'oge ahụ Atlético Madrid. O di nwute na achoputara na o nwere nkpuru obi ma gha agha ogwu iji mechaa ya gaa Spanish.
Surgerywa obi ya wepụrụ ya na ihe omume nke ọ turu anya ya isonye.
Ee, etinyere etuto ahụ n'ụzọ gara nke ọma site na ịwa ahụ, ọ bịara na ọnụ ahịa nke hụrụ Correa ka ọ ghara inwe ọkara na nke ikpeazụ nke Copa Libertadores na San Lorenzo.
Ihe ndị ahụ bụ egwuregwu ọ na-atụ anya na ọ ga-egwu n'ihi na o mere ọtụtụ ihe iji nyere ndị otu ya aka ịbanye na njedebe.
Akwụkwọ akụkọ Angel Correa - Nbilite na Aha Ya Akụkọ:
Mgbe Correa mechara gbakee, ọ sonyeere Atlético Madrid na 13th Disemba 2014 wee rụọ ọrụ iji ghọọ otu n'ime ndị na-aga n'ihu na klọb n'ime afọ ole na ole.
Hụ onye rụworo ọrụ iji bulie isi na Atlético Madrid.
Achọpụtaghị ya na ọrụ mba ya na ndị otu mba Argentine ebe a na-atụnyere ya na onye otu ya Sergio Agüero ọbụlagodi mgbe ọ na-egwu ụdị egwuregwu dị ka ya Carlos Tevez. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Angel Correa hụrụ ndụ n'anya - enyi nwanyị, nwunye, Kid (s)?
N'ịga n'ihu na ndụ ịhụnanya nke Correa, amabeghị ọtụtụ ihe gbasara akụkọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-aga n'ihu n'ihi na ọ ekpughebeghị ọtụtụ ihe na-eme na ngalaba ahụ.
Dika odi otua, apughi ikwuputa ya na o nwere ndi enyi nwanyi n'oge gara aga ma obu nweghi nwunye n'oge edere.
Otú ọ dị, dị ka WTFoot si kwuo, e nwere onye ibe nzuzo dị omimi aha ya bụ Sabrina Di Marzo bụ onye nụrụ asịrị na ọ bụ Angel Correa Girlfriend na nne nwa ya nwanyị.
Dị ka e kwuru na mbụ, Angel bụ nne na nna nye nwa nwanyị mara mma Lolita onye ọ mụrụ site na enyi nwanyị ya ma ọ bụ nwunye ya.
Foto Lolita na-eto ngwa ngwa ma nwee obi ụtọ na akaụntụ Instagram ya. Kedu ihe ọzọ? nwa agbọghọ mara mma na-enwe mmasị ịnọnyere nna ya nke nwekwara ụlọ ọrụ ya.
Angel Correa hụrụ nwa ya nwanyị n'anya ma na-anọnyere ya nke ọma.
Angel Correa Biography - Ndụ Ezinụlọ:
O kwuru na ndị nwere ọgụgụ isi na-ahapụ ụlọ iji chọọ uba ma laghachi n'ụlọ iji soro ezinụlọ ha kerịta ya.
A pụkwara ikwu otu ihe ahụ banyere Angel Correa onye na-enye ezinụlọ ya nri. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndị ezinụlọ Correa na-amalite na nne na nna ya.
Banyere fatherngel Correa nna: Correa nwụrụ n'oge nna ya mgbe ọ dị afọ 12.
Ọ bụ ezie na onye ahụ egosipụtabeghị ihe kpatara ọnwụ nna ya, ọ na - eto onye ahụ nwụrụ anwụ maka inye ya ncheta nwata kacha nwee obi ụtọ site na isoro ya gaa ọzụzụ.
Banyere nne Ángel Correa: You maara na mama mama Correa bụ otu n'ime ọtụtụ nne na-ahụ n'anya nke gosipụtara na ịzụ nwa bụ maka ịchụ ihe niile n'àjà? O nyeere aka zụlite ndị na-eso ya na ụmụnne ya mgbe di ya nwụsịrị.
N'ezie, mama Correa anaghị eri nri ruo mgbe ọ hụrụ na ụmụ ya rijuru afọ.
Ọ na-enwe obi ụtọ nke ukwuu na Correa bụ onye weere ọrụ nke onye na-akpa afọ site na afọ 12 site n'inye Per Diem maka nlekọta ezinụlọ.
Foto dị obere nke Angel Correa na nne ya.
Banyere Sibngel Correa Siblings: Onye na-aga n'ihu nwere ọtụtụ ụmụnne na-nọmba 10. Ọ furu efu abụọ n'akụkụ nna ya ogologo oge gara aga ebe amabeghị ọtụtụ ihe banyere ndị ọzọ ekwere na ha bụ ụmụ nwoke.
Nke a bụ n'ihi na Correa na-ekwukarị banyere igbo mkpa nne ya na ụmụnne ya na-akpọghị ụmụnne nwanyị n'oge a gbara ajụjụ ọnụ. N'okpuru ebe a bụ ụlọ kacha nso nke ezinụlọ Angel Correa anyị chọtara.
Angel Correa ya na nne ya na otu n’ime ụmụnne ya.
Banyere ndị ikwu Ángel Correa: Ewezuga ndụ ezinụlọ Angel Correa, amachaghị banyere nna nna ya na mgbọrọgwụ ezinụlọ ya.
Nke a kachasị dịka ọ metụtara nne na nna ya na nne na nna ya ka amatabeghị nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'oge a na-ede akwụkwọ akụkọ a.
Angel Correa Biography - Ndụ Nke Onwe:
Dị ka mmadụ niile, Angel Correa nwere àgwà nke na-akọwa onye ọ bụ n'ezie n'èzí egwuregwu.
Àgwà nke onye ọ bụla nke Pisces Zodiac na-eduzi na-ekere òkè na-agụnye mmetụta dị nro nke ịga n'ihu, ọdịdị nke mmetụta uche na ntụpọ ntụpọ.
Correa nke na - anaghị ekpughe eziokwu banyere nke onwe ya na nke onwe ya na-etinye aka na obere ọrụ gafere maka ọdịmma ya na ntụrụndụ ya.
Ha gụnyere igwu egwuregwu vidio, ime njem na iso ezigbo ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Egwuregwu vidio bụ otu n'ime ihe ntụrụndụ. Nwa ya nwanyị nwekwara otu ihe omume ntụrụndụ ahụ.
Ndụ Angel Correa:
Na-ekwu maka mbọ ego ego Angel Correa na omume mmefu ya, ọ na-enweta ọtụtụ ụgwọ, ụgwọ ọnwa, na mmeri na-emeri bọọlụ maka ịgba bọọlụ elu-elu ebe nkwanye ugwu na-arụ ọrụ dị mkpa na ịrị elu akụnụba ya,
Ya mere, onye na - aga n'ihu nke nwere ihe ruru nde $ 3.50 n'oge edere bio a.
Ọ nwere ihe ọ ga - ewe iji bie ndụ okomoko dị ka ndị na - enweta egwuregwu ahụ Cristiano Ronaldo, Neymar Jr na Paul Pogba.
Ọnụ ego ruru Correa nke ruru ihe karịrị $ 3 nde na-ekwu okwu ọma banyere ọdịdị bara uru nke ịgba bọl elu elu.
Angel Correa Eziokwu efu:
Iji mee ka akụkọ banyere nwata na akụkọ banyere nwata akụkọ akụkọ Angel Correa, ebe a bụ ntakịrị ihe ọmụma banyere ma ọ bụ akụkọ a na-akọghị banyere ọdịnihu.
Mmebi ụgwọ ọnwa: Dị ka ọ dị na Septemba 2018, nkwekọrịta nke Argentine na Atlético Madrid hụrụ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ Nde Euro 3.5 kwa afọ. Crunching ụgwọ ụgwọ Angel Correa na ọnụ ọgụgụ, ọ na-enweta ihe ndị a.
Ndakpọ mmụọ Angel Correa. Ebe E Si Nweta: WTFoot
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Angel Correa'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Ọ ga-ewe onye ọrụ gbagote na Europe ma ọ dịkarịa ala afọ 8.6 iji nweta otu ihe ahụ angel na-akpata na 1 ọnwa.
Religion: Ndị nne na nna Angel Correa zụlitere ya n'ịgbaso nkwenkwe okpukpe ndị Kraịst. Ndị ọgba bọọlụ bụ onye Katọlik na-eme ihe ka ọtụtụ ndị amụrụ na Rosario na Argentina.
N'ezie, o zutere Jorge Mario Bergoglio na Argentina tupu ọ ghọọ Pope Francis.
Angel Correa na Kadinal Jorge Mario Bergoglio.
Ogbugbu: O doro anya na Correa buru ibu na egbugbu ma nwee nka na olu ya, obi ya, ogwe aka ya na ụkwụ ya. Onweghi ogwugwu n’iru uzo ihe omuma ndi ozo o gha enweta n’ihi na ohere ka di.
Fim FIFA: Ihe nyocha FIFA Correa zuru oke na-eguzo na 82 n'oge a na-ede akụkọ a.
Agbanyeghị na ogo bụ mmelite nke afọ ndị gara aga, Fans enweghị ike ichere ịhụ ya ka ọ ruru ogo 87 maka ịchebe ọrụ ya maka egwuregwu egwuregwu FIFA.
Nwere ike ịkọwapụta ihe si na akara ya? Ebe E Si Nweta Foto: WTFoot.
Smụ sịga na Mmanya: Anaghị areaụ sịga anaghị a toụ sịga, a hụbeghịkwa ya ka ọ na-a .ụ mmanya. Dị ka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu football, ọ na-eche banyere ahụike ya ma ọ nweghị ihe ọ ga-eme iji mebie ya.
Akwụkwọ akụkọ Angel Correa Ihe Ọmụma Ihe Wiki:
N'akụkụ ikpeazụ a nke Angel Correa's Biography Eziokwu, ị ga-ahụ isi ihe ọmụma Wiki ya. Foto dị n'okpuru, ọ na-enyere gị aka ịchọta ozi gbasara Obere mmụọ ozi n'ụzọ dị nkenke ma dịkwa mfe.
Angel Correa aha ya dum Elngel Martín Correa Martínez
Angel Correa ofbọchị ọmụmụ Machị 9, 1995 (afọ 24 n’oge edere)
Ebe a mụrụ Angel Correa Rosario, Ajentina
Banyere nne na nna Angel Correa Nna ya egbuola oge ya na mama ya dị ndụ (n'oge edere).
Nwa nwanyi nke Cor Correa Lolita Correa kwuru
Okpukpe Angel Correa Iso Christianityzọ Kraịst (Onye Katọlik Na-eme Ihe)
Rating mmụọ ozi Angel Correa 81 nwere ikike 87 (dịka ọ na-abụ na Febrụwa 2020)
Aha Nick Correa Obere mmụọ ozi
Aha enyi nwanyị Angel Correa (Rumored) Sabrina Di Marzo
Aha nwunye nwunye Cor Cor (Rumored) Sabrina Di Marzo
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Angel Correa Childhood Story Plus Uzo akuko Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.